Forum serasera malagasy Maotera rotatif - Dinika forum.serasera.org
Fitohizan'ny hafatra : Maotera rotatif
Herimiafina - 18/01/2006 06:05
Lasa ny saiko amin'ity teknolojia vaovao iray ity ry zareo.
Raha oharina amin'ny maotera tsotra dia tsy mampiasa ireo piesy fahita toy ny piston, soupapa, bielle manivelle sy vilebrequin intsony fa nosoloina système rotor ny ao anaty maotera mampiodina ny volant moteur.
Araka ny fitadidiko azy dia toa nisy malagasy nanao fikarohana momba an'io ary efa naseho vahoaka tao amin'ny Cite Ambatonakanga ny vokampikarohana.
Manana vokatra (rendement énergetique) ambonimbony kokoa noho ny maotera tsotra satria hono kely ny perte d'inertie na fahaverezan'ny hery manosika amin'ity karazana maotera vaovao ity.
Ny Mazda RX-8 no efa manana an'izy io, asa raha efa misy fiara manana an'io maotera rotatif io any Dago any?
jentilisa - 18/01/2006 08:46
Marina tokoa izany voalazanao izany ary izy io mihitsy ary no nampianatra mekanika anay tamin'izaho haka permis. Mety ho izay nantony mihitsy aza anie no lazaina ankehitriny e! nomarihiny tamin'izany fotoan izany fa nisy fotoana nivoahan'io aloha dia nitsahatra ny fikarohana momba azy rehefa nahita fomba hafa ny tany avaratra tany, saingy izy kosa dia nanohy ny fikarohana ary nilaza taminay izy fa efa misy mihitsy ny manatona azy te-hahafantatra na hifanaraka amin'io voka_pikarohana nataony io.
jentilisa - 18/01/2006 08:47
fa ilay fiara manana maotera rotatif aloha mbola tsy henoko loatra an!
lapino - 18/01/2006 09:02
Herimiafina Manana vokatra (rendement énergetique) ambonimbony kokoa noho ny maotera tsotra satria hono kely ny perte d'inertie na fahaverezan'ny hery manosika amin'ity karazana maotera vaovao ity.
Nahita an'ity site ity aho: http://mecamotors.free.fr/a_mecanique/01_moteur/02_moteur_4_temps/029_rotatif/wankel01.html
Dia voalaza ao, ao amin'ny inconvénient-ny anefa fa "Consommation en essence exessive."
jentilisa - 18/01/2006 14:31
Fa raha ny fijeriko azy tsy mitovy amin'ny an'ilay malagasy io hitako eto io?
Herimiafina - 19/01/2006 01:26
Tena ohatry ny tsy mitovy marina.
Ny tadidiko dia hoe tsy ireny bielle lavalava ireny itsony no miasa amin'io fikarohana nataon'ileiry io fa lasa système piston bielle manivelle boribory, izany hoe rotor boribory iray no misolo ny bielle ary manosika ny villebrequin.
Lapino: le rendement énergétique lazaiko eto dia ilay fampitahana tsotsotra fiara mandeha andro mafana sy andro alina mangatsiaka, mazana dia ambony kokoa ny rendement ny maotera rehefa mandeha alina satria tsy misy fialan'ny hafanana be loatra (degagement de chaleur) , dia toy izay ihany koa, ny ampahany amin'ny hery na force avy amin'ny combustion sy ny fanosehan'ny piston ny manivelle dia very fa amin'ity karazana maotera iray ity dia toa raisin'ny villebrequin ny ankabetsahany.
Izany hoe raha ny puissance avoakan'ilay maotera dia rentabla ihany ny essence be loatra trohany, raha ara-physique izay fa raha ekonomika aloha dia ekena hoe mandany vola e!
lapino - 19/01/2006 05:45
Io motera Wankel io aloha no misy amin'ilay mazda rx7 sy rx8. Raha ny fahalalako azy toa mbola mazda ihany no manao an'io karazana motera io, ary ireo modely ireo ihany, ny sisan'izay mbola resaka prototype daholo. Ka raha tsy mitovy amin'io ilay motera gasy dia tsy mbola misy fiara mitondra azy izany.
Fa tsy azoko foana aloha hoe ohatra ny ahoana ilay motera gasy. Raha afaka anaovana kisary tsotsotra izao no tena favy.
- Piston manao mouvement rectiligne ihany ve, sa eo amin'ny piston dia efa mihodina?
- Dia ahoana no fifandraisany amin'ilay rotor io?
Tsy hitako manko izay ilana vilebrequin raha efa mihodina ilay rotor!!!!
Herimiafina: Ny rendement-n'ny motera dia miankina amina zavatra anankitelo:
- ny oro: complète ve ny combustion-n'ilay carburant. Amin'ny moteur de wankel io izao toa complet kokoa hono noho ny motera tsotra. Na izany aza efa hain-dry zalahy ihany mikarakara an'io amin'ny motera tsotra.
- ny fanovana an'ilay angovo ho mekanika: mazàna raisina ho manaraka cycle de carnot ny motera. Noho izany ny rendement dia proportionnelle mivantana amin'ny elanelan'ny mari-pana ivelany sy anatiny. Ilay hafanàna tsy maintsy avoakany na dia efa mafana aza ny andro, dia tsy cause fa conséquence-n'io. Eto indray tsy manavaka ny karazana motera na rotatif na piston-bielle-manivelle.
- ny frottement sy izay perte mekanika hafa: arakaraka ny habetsaky ny piesy mekanika mihetsika no mahabe azy. Ny motera rotatif eto no kely frottement kokoa. Kanefa tsy dia betsaka ny elanelana raha oharina amin'itsy ambony.
Tsy dia azoko loatra izany aloha ny mahatonga an'ilay hoe mitroka kokoa ny motera rotatif. Angamba satria mihodina malaky izy kanefa tour iray dia ahavitany cycle anankitelo.
Herimiafina - 19/01/2006 12:40
Mbola tena tsy haiko indray aloha ny analyse thermodynamika an'io maotera io e, matetika ny maotera essence sy maotera diesel tsotra no tena nanaovana études théermodynamique sy cycle de carnot momba ny énergie sy ny transformation énérgétique.
Fa eo indrindra no mampiheritreritra ahy ny amin,ilay cycle de froid sy cycle chaud hoe manao ahoana ny resaka système de refroidissement sy ny lubrification ao anatin'io maotera io?
lapino - 19/01/2006 13:11
Ilay resaka cycle de carnot bedebe @ net raha liana.
Ilay refroidissement sy lubrification indray aloha dia tsy haiko ny fandehany.
Fa ahoana hoà aloha no firafitr'ilay motera gasy raha tsy ohatra an'io motera wankel io e? Sa ohatra an'ity ve? quasiturbine: http://en.wikipedia.org/wiki/Quasiturbine
Herimiafina - 19/01/2006 13:20
Tena mbola tsy arako tsara anie iny maotera gasy iny e! Henoko fotsiny ilay izy de namaky article sty dia feno tanaty gazety zah momba ilay izy.
Fa ny fahalalako azy somary mitovy amin,ny maotera étoile no disposition ny cylindre sy bloc maotera ary tsy lavalava ny piston fa boribory, izany hoe misy repartition de charge tsara hono klé, asa klou fa i jentilisa no mety hahalala misimisy kokoa ny amin'io angamba klé,8)
lapino - 19/01/2006 16:02
Tsy dia mahasosotra ihany. Saingy raha atao anaty fiara ve io tsy mibahan-toerana ihany kle?!
Herimiafina - 20/01/2006 04:50
Asa aloha e, toa mitovy dimension amina maotera tsotra ihany satria nandramana tamin'ny fiara madinika hono.8)